Tag: mailaka junk | Martech Zone
Tag: mailaka junk
Ny marketing amin'ny mailaka rehetra izay sizily dia tsy spam
Alahady, Novambra 24, 2013 Alahady, Novambra 24, 2013 Douglas Karr
Ity infographic avy amin'ny LeadPages ity, vahaolana amin'ny pejy fitobiana, dia manome fanazavana lehibe momba ny marketing amin'ny mailaka sy ny statistikan'ny SPAM. Ny lakilen'ity infographic ity dia ny isan'ny mailaka ara-dalàna tonga ao anaty fampirimana junk. Ny vintana dia any amin'izay misy ny maro aminareo koa. Ny mailaka miorina amin'ny fahazoan-dàlana dia mitarika hatrany amin'ny kitapom-batsy amin'ny tahan'ny click-through sy ny fiovam-po. Betsaka ny orinasa manao ny ezaka rehetra ataony amin'ny paikady ahazoana fiara hitaterana fifamoivoizana bebe kokoa ka hadinony ny fomba
Asabotsy, Aprily 6, 2013 Alatsinainy, May 6, 2013 Douglas Karr
Vao tsy ela akory izay dia sendra olana kely tamin'ny mpamatsy mailaka anay izahay rehefa nanangana adiresy mailaka taloha tao amin'ny kaontinay. Taona iray amin'izy ireo no nibolisatra, nahazo fitarainana SPAM izahay ary nisy olona tezitra ka nifandray tamin'ny mpamatsy anay hitaraina. Matetika izahay no nanala ireo adiresy mailaka voalaza tao amin'ny kaonty mifanaraka amin'ny fangatahana avy amin'ny mpamatsy mailaka anay. Ny statistika amin'ity sary ity avy amin'ny Sampel E-mail dia manondro mivantana
Talata, Janoary 3, 2012 Talata, Janoary 3, 2012 Douglas Karr
Rehefa namaky ny tantara vao haingana momba ny vondrona IT any Angletera izay nandràra ny mailaka aho dia tsy maintsy nijanona ary nieritreritra ny zavatra nataoko isan'andro ary ny habetsaky ny mailaka mandroba ahy amin'ny andro mahavokatra iray. Nametraka io fanontaniana io tamin'ny mpamaky anay tamin'ny alàlan'ny fitsapan-kevim-bahoaka Zoomerang ary vitsy dia vitsy no nieritreritra fa ho faty tsy ho ela ny mailaka. Ny olana, raha ny hevitro, dia tsy mailaka. Rehefa ampiasaina am-pahombiazana ny mailaka dia
Alakamisy 8, 2007 Alarobia, Septambra 4, 2013 Douglas Karr
Misy tsiambaratelo maloto ao amin'ny indostrian'ny mailaka. Ny elefanta ao amin'ny efitrano izay tsy misy miresaka. Tsy misy olona afaka miresaka momba izany noho ny tahotra ny valifaty ataon'ny olona izay heverina ho miambina ny Inbox-nay. SPAM TSY MISY HATAONANA AMIN'NY FAHOMPOANA Marina izany. Eto ianao no naheno azy. Averiko ihany… TSY MISY HATONDRAN-TENY FAMELAN-KEVITRA INDRINDRA ny spam